कठघरामा चित्रबहादुर : ज्ञानेन्द्रले दनक दिएपछि मात्रै ठूला दलका घैँटामा घाम लागेको हो
२०७५ पौष २८ शनिबार ०७:३०:००
अभियोग १ : तपाईं नेता नभएर मोहनविक्रम सिंहको ‘फलोअर’ मात्रै हो । आफ्नो विचार दिन सक्नुहुन्न, सिंहको विचार बोकर मात्रै हिंड्नुहुन्छ । सिंहको सहयोगविना तपाईंले सास पनि फेर्न सक्नुहुन्न ।
कसैका बारेमा कसैले के बुझ्छ भन्ने कुरा उसको चेतना, अनुभव र बुद्धिले निर्धारण गर्ने हो । मैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संलग्न धेरै नेताको संगत गरेको छु । समाजवाद के हो ? नेपाली समाजको परिवर्तन किन आवश्यक छ ? कम्युनिस्ट पार्टी नै किन चाहिन्छ भन्ने विषयमा म केशरजंग रायमाझीको क्लासबाट कन्भिन्स भएर यो आन्दोलनमा लागेको हुँ । त्यतिवेला मोहनविक्रम सिंहसँग भेटघाट र चिनजान नै थिएन । त्यसपछिका दिनहरूमा मनमोहन अधिकारीजीको पनि संगत गरेँ । पुष्पलाल श्रेष्ठ र तुल्सीलाल अमात्यसँग त म भान्सै जोडेर भारतमा कैयौैँ महिना सँगै बसेँ, त्यतिवेला म स्कुलमा हेडमास्टर थिएँ । भनेपछि अब केशरजंगसितै म दरबारतिर किन लागिनँ ? फाइदा त त्यतै थियो नि । पुष्पलाल र तुल्सीलालसँग भारतमा महिनौँ महिना कहिले दरभंगा, कहिले वनारस, कहिले गोरखपुर त कहिले दिल्ली हिँडेर त्यत्रो संगत गरेको मान्छे, उनीहरूकै पछि किन लागिनँ ? निर्मल लामाजीसँग म दश वर्ष एउटै केन्द्रीय समितिमा बसेर काम गरेँ । मोहन वैद्यसँग दशौँ वर्ष एउटै कमिटीमा बसेको छु । उहाँ त अहिले पनि हुनुहुन्छ नि । उहाँसँग किन टाँस्सिइनँ म ? मेरो मदन भण्डारीसँग चिनजान थिएन कि ? झलनाथ खनालसँग त म एक/डेढ वर्ष साथै बसेँ । माधव–ओलीलाई चिन्दिनथेँ कि ? विप्लवलाई चिन्दिनँ र म ? ती जति पनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेताहरू छन्, जोसँग म सँगै हिडेँ/काम गरेँ, उनीहरूकै पछि किन लागिनँ त ?
प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूको हकहितमा लड्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाभन्दा अर्को कुनचाहिँ पार्टी देख्नुहुन्छ तपाईंले ? प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूको रेमिट्यान्सले देश चलेको छ । उनीहरूलाई मताधिकार हुनुपर्छ भनेर पहिलेदेखि लगातार लडिरहेको एउटा पार्टी जनमोर्चा मात्रै हो । अर्को कुरा, प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई संगठित गर्ने, उनीहरूको चेतनाको विकास गर्ने, नेपालको प्रजातान्त्रिक वाम आन्दोलनमा उनीहरूको सहयोग लिने कुरामा हामी कहिल्यै पछाडि परेका छैनौँ । हो, कुनै व्यक्तिलाई छुट्टै उसको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हुने गरी हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ । तर, प्रवासी नेपालीहरूको सामूहिक स्वार्थ र हकहितका लागि हामी लगातार आवाज उठाइरहेका छौँ, लडिरहेका छौँ ।